हामी परदेशीले कहिलेदेखि देशमा ठाउँ पाउँछौं ?
Wed, Apr 25, 2018 | 08:30:32 NST
नवराज बिसी, हाल साउदी ।
हामी युवा नेपालमा किन अटाउन सकिरहेका छैनौ ? जबकी हाम्रै देशमा एउटा भनाई चर्चित छ, ‘युवा शक्ती देशको मेरुदण्ड हो ।’
तर युवालाई देशमा राख्न केहि गरिंदैन । त्यस्ता योजना आउन सकेका छैनन् । परदेशको पीरले कतिपय युवा जबर्जस्ती नेपालमै बस्छु, केही गर्छु भनेर नेपाल फर्किन्छन् ।
तर सधैंको बन्द हड्ताल, चक्काजाम, विभिन्न समुहको चन्दा आतंकले देशबाट लखेटिन वाध्य बनाउँछ । अनि लगानी डुबाएर घरद्ध बर्ष छाडेर फेरि म्यानपावर धाउन थाल्नुपर्छ ।
अनि म्यानपावरले पनि तिनै युवालाई लुट्छन् । सरकारका कारबाही गर्ने निकाय मौन बस्छन् । हामी परदेशिनेहरुलाई लुट्न सरकारी कर्मचारीको पनि मिलेमतो र संलग्नता छ ।
हामीलाई ठगेर म्यानपावरका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारी फस्टाउँछन् । तर हामी आफ्नो घरलाई वृद्धाआश्रम जस्तो बनाएर छाडेर हिड्नु पर्छ ।
देशमा हुनेहरु कि सहर पस्छन् कि त नेताको झोला बोकेर दिन बिताइरहेका छन् । मेरो बिचारमा देशको विग्रंदो फोहोरी राजनीतिले दिनदिनै समस्या थपिंदैछ । हुनत राजनीतिलाई समाज सेवा भन्ने चलन छ ।
तर राजनीति समाज सेवाको भावले गर्न छाडे । राजनीतिका नाममा व्यापारी, उधोगी, भ्रष्टाचारी, अदालतले अपराधी ठहर गरि जन्म कैदको फैसला गरेकाहरु सम्म छन् ।
अनि अपेक्षा गर्छौं सुन्दर शान्त, बिकसित, बोरोजगार रहित, भ्रष्टाचारमुक्त, लोडसेडिङमुक्त, नयाँ नेपालको । यो त बारीमा गाँजा लगाएर पिंडालुको आश गरे जस्तै हो ।
अव फेरि गाउँ गाउँमा नेता छान्ने दिन आउँदैछ । यो हाम्रा लागि एउटा अवसर हो । अवको चुनावमा हामीले देशको बारेमा सोच्ने र काम गर्न सक्ने सहि नेतृत्व छान्यौं भने नेपाल मै रमाएर काम गर्ने दिन आउँथ्यो कि !